यो हो गाईले पत्ता लगाएको अनौठो गुप्ते`श्वर महादेव गुफा, जहाँ सात जना दर्शनार्थी मात्र अटाउन सकिन्छ !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/यो हो गाईले पत्ता लगाएको अनौठो गुप्ते`श्वर महादेव गुफा, जहाँ सात जना दर्शनार्थी मात्र अटाउन सकिन्छ !!
खोटाङ, परापूर्वकालमा गार्ईले पत्ता लगाएको भनेर चिनिने खोटाङको अर्खैलेस्थित गु`प्ते“श्वर महादेव गुफा आझेलमा परेको छ । दर्शन गर्न सुते`रै प`स्न र निस्कनुपर्ने अनौठो किसिमको गुप्ते`श्वर महादेव गुफा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१० अर्खौलेस्थित दुक्सि`लीमा अवस्थित छ । विशाल चट्टानको फेदमा अवस्थित गु`प्तेश्वर महादेव गु`फाभित्र सात जना दर्शना`र्थी मात्र अटाउन सकिन्छ । कालो चट्टानले बनेका गुफामा थुप्रै शिला देख्न सकिन्छ । ती सबैको धार्मिक मान्यता अनुसार नाम-करण गरिएका छन् ।
गुप्ते`श्वर महादेवको विशाल गुफा`भित्र महादेव, चन्द्रमा, गणेश, शिवजी, सप्तऋषि, महादेवको शिर र कछुवालगाइत थुप्रै आकृति देख्न सकिन्छ । त्यसमध्ये डेढ फिट उचाइको शिलालाई गुप्ते`श्वर महादेव भ`न्ने गरिन्छ । गुफा`भित्रको विशाल शिलाबाट चौबीसै घण्टा तपतप पानी चुहिरन्छ । गुफा पस्ने र निस्कने ठाउँमा गार्ई आकारको शिला टाढैबाट प्रस्ट देख्न सकिन्छ । गु`प्तेश्वर महादेव विसं १७२६ सालमा पत्ता लागेको हो भन्ने वि`श्वास गरिइएको छ ।
अर्खौलेका स्थानीय बुढापाकाका अनुसार सोही ठाउँका सुवोध राईको एउटा ब्या`उन लागेको गार्ई उस बेला गोठबाटै हरा`एको थियो । गोठ`बाटै हराएको गार्ई खोज्दा खोज्दै महि`नौँ बित्यो । अहिलेको गु`प्तेश्वर महा“देव गुफा पारि पट्टि थियो सुवोधको गार्ई गोठ । सुवोधले धेरै दिनपछि गार्ईको गोठ नजिकैको खेतमा आफ्नो गार्ईले धान खाइरहेको सपना देखेका थिए । उज्यालो भएपछि सुवोध त्यहाँ पुग्दा गार्ईले धान खाइरहेको देख्दा तीनछक परेका थिए । सपनामा देखेको गार्ईले विपनामा धान खाइरहेको देख्दा अचम्म ला`ग्नु अस्वाभाविक भने होइन् ।
सुवोध धान खाइरहेको गार्ईनजिक पुग्दा गार्ई हराउँथ्योे । गार्ईधनी दुई÷चार दिन त्यसरी धान खाइरहेको गार्ईको पछि लागेका थिए । गार्ईनजिक पुग्ने क्रममा हराएपछि सुवोधले कता–कता गार्ई कराएको आवाज सुनेका थिए । आवाज पहिल्याउँदै जाँदा धान खाइरहेको देखेको गार्ई गु फा भित्र देखिएको थियो । मानिस पस्न र निस्कन अप्ठ्या`रो गुफाबाट गार्ई निकाल्न त्यति सजिलो थिएन । एक्लैले गार्ई निकाल्न नसक्ने भएपछि सुवोधले गाउँलेसँग हा`र`गुहा`र मागे ।
सहयोगी लिएर गएका सुवोधसँगै गुफा पुगेकामध्ये केहीभित्र पसे र केही बाहिरै बसे । भित्रकाले गार्ई धकले । बाहिरकाले दाम्लोको सहाराले ताने तर गार्ई निकाल्न सकिएन । गार्ई निकाल्न सहयोग गर्न पुग्नेले भने, “गार्ई निकाल्न सकिँदैन, माया मारौँ ।” त्यसो भन्दै सहयोगी घर फर्के । गार्ईधनी सुवोध त्यहीँ बसे । आफ्नो गार्ईको माया लाग्नु स्वाभाविकै थियो सुवोधलाई । सुवोध ले मनमनै सोचे, “मलाई भगवान्ले छल त गरेन १” सुवोधले मनमनै आराधना गरे । पूजाआजामात्रै होइन, भाकलसमेत गर्न भ्याए । त्यत्ति गरेपछि गुफाबाट गार्ई सजिलै बाहिरियो । त्यत्रा सहयोगी सहित निकाल्ने प्रयास गर्दा निकाल्न नसकिएको गार्ई गार्ई`धनी सुवोध एक्लैले निकाले । त्यसपछि गाउँभरि चर्चा–परिचर्चा भयो । त्यसपछि यस गुफालाई ‘गुप्ते`श्वर महादेव गुफा’ भ`न्न थालिएको हो ।
गुप्तेश्वर महादेव गुफा आसपासमै पार्वती`थान र सिकारी`थान समेत रहेका छन् । छेउमै बगेको कलकल पानीले गुप्तेश्वर पुगेकालाई आनन्दित तुल्याउँछ । गाउँको पुछारमा रहेकाले शान्त वातावरण छ । खोलाछेउ मात्रै होइन, घनाजङ्गलबीचमा भएकाले गुप्तेश्वर पुगेकाले शीतल अनुभूति गर्छन् । त्यहाँसम्म पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुवि`धाका लागि केही पसलसमेत खोलिएका छन् ।